ခြှေးပေါကျကယျြနပွေီလား - OnDoctor
By Kaung Htet Naing	 On Jan 22, 2019
ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်းကြောင့် အဆင်မပြေ အသားရည် မလှတာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီး များဟာ အမျိုးသားများထက်ပိုပြီး ဂရုစိုက်ရပါတယ် ။ ချွေးပေါက်ကျယ်ပြီး အညစ်အကြေးတွေး ပိတ်ရင် ဝက်ခြံပေါက်လာပြီး အသားရည် မလှနိုင်တော့ပါဘူး ။ အဲလို မဖြစ်အောင် အသားရည်ကို သေချာ ထိန်းသိမ်းရအောင်နော် ။ အသားအရေထိန်းချုပ်မှုမှာ မျက်နှာကိုသန့်စင်တာကပထမအဆင့်ဖြစ်ပြီးဒုတိယအဆင့်ကတော့တိုနာလိမ်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုနာကို မျက်နှာသန့်စင်ပြီးချိန်နဲ့ အစိုဓာတ် ခရင်မ်မလိမ်းခင်အချိန်မှာလိမ်းသင့်ပြီးအသားအရေထဲကိုစိမ့်ဝင်ရောက်ရှိစေနိုင်ပါတယ်။
မျကိနှာသန့်စင်ပြီးလိမ်းတဲ့တိုနာရည်ဟာအရေပြားရဲ့သဘာဝ pH ဓာတ်ကိုထိန်းပေးပါတယ်။အရေပြားရဲ့ pH ဓာတ်က ၄ ဒသမ ၅ (4.5)ရှိနေမှ ပုံမှန်ရှိ နေတာပါ။ တစ်ချို့သန့်စင်ဆေးတွေကြောင့် အရေပြားရဲ့ pH က ၁၄ အထိရောက်သွားနိုင်တဲ့အတွက် pH မျှခြေ ပျက်ပြယ်သွားပြီး အသားအရေခြောက်သွေ့တာနဲ့. မာတင်းတာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။တိုနာရည် (Toner)ဟာ အသားအရေကိုအစိုဓာတ်ပြန်ဖြည့်ပေးပြီးအသားအရေစိုပြည်နူးညံ့ချောမွေ့စေပါတယ်။ တိုနာလိမ်းတာကြောင့် အသားအရေနူးညံ့တာ ၊အရေးအကြောင်းပါးပါးကိုလျော့ပါးစေတာ၊ ရောင်ရမ်းမှုလျော့နည်းတာ၊အဆီနဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းစင်တာ နဲ့မျက်နှာပေါ်က မိတ်ကပ် အကြွင်းအကျန်တွေ ကင်းရှင်းတာစတဲ့ကောင်းကျိုးတွေရရှိတတ်ပါတယ်။
ချွေးပေါက်ထဲကအဆိပ်အတောက်တွေကိုကင်းစေပြီး ချွေးပေါက်ကိုကျဉ်းစေပါတယ်။မျက်နှာသစ်ပြီး တိုနာရည်ကိုဂွမ်းစဆွတ်လိမ်းတာကြောင့မျက်နှာပေါ်ကအ ဆီတွေကို ကင်းစင်စေတဲ့အတွက် ၀က်ခြံမပေါက်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။တိုနာကအသားအရေကိုရေဓာတ်ပြည့်ဝစေပါတယ်။တိုနာကြောင့်အသားအရေစိုပြည်စေဖို့အယ်လ်ကိုဟောမပါဝင်တဲ့အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။အဆီတုန်း၊အမွှေးနံ့၊မန်သော် စတာတွေပါရင်လည်းအသားအရေကို စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်စေတာကြောင့်ရှောင်ပါ။တိုနာလိမ်းတဲ့အခါ ၀ါဂွမ်းစကိုတိုနာရည်ဆွတ်ပြီးမျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းအနှံ့ သုတ်လိမ်းပါ။နူးညံ့တဲ့မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက်ကိုရှောင်ရပါမယ်။ချွေးပေါက်ကျယ် ပြီး ဆဲလ်သေတွေကျန်တာများနေရင် အသားရည် က မွဲခြောက်ခြောက်ဖြစ်မယ် ။ မိတ်ကပ်သေချာ မဖျက်ရင်၊ အသက်မကြီးခင် အရွယ် မလွန်ခင် အရေပြားက အိုမင်းလာပါလိမ့်နော် ။ အရေပြားကို ဂရုစိုက်ကြပါလို့။
ခြှေးပေါကျကယျြခွငျးကွောငျ့ အဆငျမပွေ အသားရညျ မလှတာတှေ ဖွဈလာပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အမြိုးသမီး မြားဟာ အမြိုးသားမြားထကျပိုပွီး ဂရုစိုကျရပါတယျ ။ ခြှေးပေါကျကယျြပွီး အညဈအကွေးတှေး ပိတျရငျ ဝကျခွံပေါကျလာပွီး အသားရညျ မလှနိုငျတော့ပါဘူး ။ အဲလို မဖွဈအောငျ အသားရညျကို သခြော ထိနျးသိမျးရအောငျနျော ။ အသားအရထေိနျးခြုပျမှုမှာ မကျြနှာကိုသနျ့စငျတာကပထမအဆငျ့ဖွဈပွီးဒုတိယအဆငျ့ကတော့တိုနာလိမျးတာပဲဖွဈပါတယျ။တိုနာကို မကျြနှာသနျ့စငျပွီးခြိနျနဲ့ အစိုဓာတျ ခရငျမျမလိမျးခငျအခြိနျမှာလိမျးသငျ့ပွီးအသားအရထေဲကိုစိမျ့ဝငျရောကျရှိစနေိုငျပါတယျ။
မကြိနှာသနျ့စငျပွီးလိမျးတဲ့တိုနာရညျဟာအရပွေားရဲ့သဘာဝ pH ဓာတျကိုထိနျးပေးပါတယျ။အရပွေားရဲ့ pH ဓာတျက ၄ ဒသမ ၅ (4.5)ရှိနမှေ ပုံမှနျရှိ နတောပါ။ တဈခြို့သနျ့စငျဆေးတှကွေောငျ့ အရပွေားရဲ့ pH က ၁၄ အထိရောကျသှားနိုငျတဲ့အတှကျ pH မြှခွေ ပကျြပွယျသှားပွီး အသားအရခွေောကျသှတေ့ာနဲ့. မာတငျးတာတို့ဖွဈတတျပါတယျ။တိုနာရညျ (Toner)ဟာ အသားအရကေိုအစိုဓာတျပွနျဖွညျ့ပေးပွီးအသားအရစေိုပွညျနူးညံ့ခြောမှစေ့ပေါတယျ။ တိုနာလိမျးတာကွောငျ့ အသားအရနေူးညံ့တာ ၊အရေးအကွောငျးပါးပါးကိုလြော့ပါးစတော၊ ရောငျရမျးမှုလြော့နညျးတာ၊အဆီနဲ့အညဈအကွေးတှကေငျးစငျတာ နဲ့မကျြနှာပျေါက မိတျကပျ အကွှငျးအကနျြတှေ ကငျးရှငျးတာစတဲ့ကောငျးကြိုးတှရေရှိတတျပါတယျ။
ခြှေးပေါကျထဲကအဆိပျအတောကျတှကေိုကငျးစပွေီး ခြှေးပေါကျကိုကဉျြးစပေါတယျ။မကျြနှာသဈပွီး တိုနာရညျကိုဂှမျးစဆှတျလိမျးတာကွောင့မကျြနှာပျေါကအ ဆီတှကေို ကငျးစငျစတေဲ့အတှကျ ဝကျခွံမပေါကျအောငျ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။တိုနာကအသားအရကေိုရဓောတျပွညျ့ဝစပေါတယျ။တိုနာကွောငျ့အသားအရစေိုပွညျစဖေို့အယျလျကိုဟောမပါဝငျတဲ့အမြိုးအစားကိုရှေးခယျြပါ။အဆီတုနျး၊အမှေးနံ့၊မနျသျော စတာတှပေါရငျလညျးအသားအရကေို စပျဖဉျြးဖဉျြးဖွဈစတောကွောငျ့ရှောငျပါ။တိုနာလိမျးတဲ့အခါ ဝါဂှမျးစကိုတိုနာရညျဆှတျပွီးမကျြနှာနဲ့ လညျပငျးအနှံ့ သုတျလိမျးပါ။နူးညံ့တဲ့မကျြဝနျးတဈဝိုကျကိုရှောငျရပါမယျ။ခြှေးပေါကျကယျြ ပွီး ဆဲလျသတှေကေနျြတာမြားနရေငျ အသားရညျ က မှဲခွောကျခွောကျဖွဈမယျ ။ မိတျကပျသခြော မဖကျြရငျ၊ အသကျမကွီးခငျ အရှယျ မလှနျခငျ အရပွေားက အိုမငျးလာပါလိမျ့နျော ။ အရပွေားကို ဂရုစိုကျကွပါလို့။
About sweat poresDr. Z